Ceni – Lisi-pifidianana: “Tsy kitihina intsony” | NewsMada
“Araka ny voalazan’ny lalàna momba ny fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka: ny 1 desambra ka hatramin’ny 15 mey ny taona manaraka no anaovana ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana.”
Io ny fampahatsiahivan’ny mpampaka-teny eo anivon’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, momba ny famaranana tanteraka ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana, omaly.
Io lisi-pifidianana nofaranana omaly io no hampiasaina amin’ny fifidianana solombavambahoaka amin’ny 27 mey. Ny dikan’izay, rehefa voafarana tanteraka, omaly, ny lisi-pifidianana, tsy misy intsony ny fikitihana izany: tsy misy mpifidy azo ampidirina na esorina. Izay lisi-pifidianana izay ihany koa no hampiasaina amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna, amin’ity taona ity.
Raha ny tarehimarika eo amin’ny lisitry ny mpifidy amin’izao fotoana izao: nahita mpifidy 9 979 999 tamin’ny famaranana vonjimaika ny lisi-pifidianana, ny 28 febroay. “Izany hoe rehefa noraisina ireo antontan-taratasy tsy ofisialy sy ny antontanisa tsy ofisialy momba ny isan’ny mpifidy, efa nihoatra ny 10 tapitrisa ireo mpifidy ao anatin’ny lisi-pifidianana amin’izao fotoana izao“, hoy izy.
Aorian’ny famaranana tanteraka ny lisi-pifidianana, omaly io, ny tarehimarika raikitra eo amin’ny isan’ny mpifidy manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Misy ny rafitra miandraikitra ny famaranana ny lisitra
Teo anivon’ny rantsa-mangaikan’ny Ceni (Ced) amin’ireo distrika 119 manerana an’i Madagasikara no nanaovana ny fombafomba tamin’ny famaranana ny lisi-pifidianana. Misy ny rafitra miandraikitra izany, ahitana ireo mpikamban’ny vaomiera misahana ny fifidianana eny anivon’ny distrika (Ced), miaraka amin’ny filohan’ny vaomiera misahana ny fifidianana eny anivon’ny kaominina, renivohitry ny distrika. Ireo no manao ny fombafomba sy ny fanamarinana samihafa amin’izay famaranana izay. Ankoatra ireo, avelan’ny lalàna mandray anjara amin’izany koa ny solontenan’ny antoko politika sy ny firaisamonina sivily, izay manao fanambarana handray anjara amin’izany. Miara-miasa amin’io rafitra mamarana ny lisi-pifidianana eo anivon’ny distrika io izy ireo.